पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस
पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस
तातो तेलको मालिस=पैंतालामा तेलको मालिस नै खुुट्टालाई तातो बनाएर रक्त सञ्चार प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अचुक उपाय हो । हरेक दिन पैंतालामा तेलको मालिस गरेमा खुट्टालाई बलियो बनाउनुका साथै हामीलाई विभिन्न रोगबाट बचाउँछ ।– तोरीको तेल, तिल वा नरिवलको तेललाई हल्का तताउने ।– यसलाई चिसो पैंतालामा मज्जाले दल्ने । करिब दश मिनेटसम्म पैंताला, कुर्कुच्च र औंलाका वरिपरि मसाज गर्ने ।– मसाजपछि खुट्टामा तुरुन्तै सुती कपडा बेर्ने वा मोजा लगाउने ।– राति सुत्नुभन्दा केही बेर अगाडि दिनहुँ यो प्रक्रिया अपनाउने ।
हाइड्रो थेरापी (तातो पानीको मसाज)घरैमा हाइड्रोथेरापी गरेमा चिसो पैंतालालाई तातो बनाउन सकिन्छ । यसको लागि चिसो र तातो दुवै खालको पानी चाहिन्छ । किनकि तातो पानीले रक्त सञ्चारलाई तीव्र बनाउँछ भने चिसो पानीले विभिन्न रोगका लक्षण हटाउन मद्दत गर्छ ।– दुई वटा बाटामध्ये एउटामा चिसो पानी र अर्कोमा तातो पानी हाल्ने ।– करिब दुई मिनेटसम्म चिसो पानीमा पैंताला डुबाइराख्ने ।
– त्यसपछि एक मिनेटसम्म तातो पानीमा डुबाउने ।– पैंतालालाई आराम नमिलेसम्म यो प्रक्रियालाई करिब बीस मिनेटसम्म दोहोर्याइराख्ने ।– त्यसपछि पैंतालालाई सुख्खा बनाएर सुतीको मोजा लगाउने ।पैंताला डुबाउनुअघि उक्त पानीमा अदुवाको केही थोपा रस, रोजमेरी, पुुदिनाको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
खुट्टाको व्यायाम=निरन्तर व्यायाम गर्दा पनि खुट्टामा रक्त सञ्चार प्रवाह प्रभावकारी बनाएर पैंताला तताउन सकिन्छ । खुट्टाको व्यायाम यसरी गर्न सकिन्छःतरिका नम्बर १=– कुर्कुच्चाको भाग उठाउँदै औंलाको सहारामा करिब एक मिनेट सीधा उभिने । विस्तारै पैंतालालाई भुइँमा राख्ने ।– यो प्रकृया दश मिनेटसम्म दोहार्याउने ।
तरिका नम्बर २– कुर्सीमा बसेर पैंतालालाई पहिले घडीको सुई घुम्ने दिशामा र त्यसपछि उल्टो तरिकाले करिब दशदेखि बीस मिनेटसम्म घुमाउने ।तरिका नम्बर ३– भुइँमा रुमाल वा कपडाको टालो झारेर त्यसलाई खुट्टाको औंलाले च्यापेर टिप्ने । यो प्रक्रिया केही समय दोहोर्याइराख्ने ।
फिटकीरी=पैंतालाको स्याहार गर्ने अर्को सजिलो उपाय भनेको फिटकिरीको प्रयोग हो । जाडो मौसममा हात–खुट्टा चिसो हुनुमा म्याग्नेसियम तत्वको कमी पनि प्रमुख मानिन्छ । फिटकिरीले शरीरलाई म्याग्नेसियम प्रदान गर्छ ।– एक बाटा तातो पानीमा एक चौथाइ फिटकिरी मिसाएर घोल्ने ।– अब त्यो पानीमा खुट्टालाई १५–२० मिनेट डुबाइराख्ने ।– यो प्रक्रिया हप्तामा कम्तीमा दुई पटक दोहो¥याउने ।
अदुवा=अदुवाले शरीरको रक्त सञ्चार तीव्र गर्न मद्दत गर्नुका साथै चिसो लाग्नबाट जोगाउँछ । साथै अदुवाले रगत जम्न समेत दिँदैन ।– एक चिया चम्चा काटेको अदुवालाई दुई कप पानीमा करिब १० मिनेट डुबाएर राख्नुस् । अब त्यसमा अलिकति मह मिसाएर दिनमा २\_३ पटक सेवन गर्नुहोस् ।– एक भाँडो पानीमा अलिकति अदुवा हालेर त्यसलाई केही समय उमाल्नुस् । त्यसलाई सेलाउन दिनुस् । अब सो घोलमा करिब १५ मिनेट आफ्नो खुट्टालाई डुबाउनुस् ।– अदुवा प्रयोग गरिएका औषधिको सेवनले पनि तपाईँलाई फाइदा गर्छ ।
ग्रीन टी=चिसो पैंतालाको उपचारका लागि ग्रीन टी पनि लाभदायक मानिन्छ । दैनिक ग्रीन टीको सेवनले शरीरमा राम्ररी रक्त सञ्चार गराउँछ ।– दैनिक २/३ कप ग्रीन टीको सेवन गर्ने ।– एउटा ठूलो भाँडामा तातो पानी हालेरमा त्यसमा ग्रीन टीको ३\_४ वटा ब्याग दश मिनेटसम्म भिजाउने । त्यो पानीमा करिब दश मिनेट खुट्टा डुबाएर राख्दा पनि चिसो पैंतालालाई राहत मिल्छ। एजेन्सीको सहयोगमा
यसरी बनाउनुहाेस् मात्र दुइ मिनेट मै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो सेतो हुन्छ